Umthandazo wokuphilisa unxunguphalo. ? Ukulwa noxinzelelo kunye noxinzelelo.
Umthandazo wokunyanga uxinzelelo. Ixhala yile mvakalelo eguqula izinto ezintle ebomini ibe zizizathu zokuxhalaba nokubandezeleka. Ukuba ungumntu wokholo okanye ufuna ukuba yiyo, faka kubomi bakho bemihla ngemihla a umthandazo wokunyanga uxinzelelo. Isenokuba iyeza elilungileyo ukujongana namaxesha okungaqiniseki kunye nokuphelelwa lithemba.
1 Umthandazo wokunyanga uxinzelelo
2 Umthandazo wokuphilisa ixhala
3 Umthandazo wokuphilisa ukholo nangaliphi na ixesha
4 Umthandazo wokunyanga uxinzelelo olungxamisekileyo
Eyona nkcazelo yesayensi isetyenziswa kakhulu xa ixhala yile: ? Kodwa ngoku kufuneka uzibuze ukuba yintoni ekwenza uxhalabe kwaye njani a umthandazo wokunyanga uxinzelelo unganceda. Namhlanje, ezona zinto zibangela ixhala kukusebenza kunye nothando ubudlelwane, njengoko kwezi ndawo zimbini zobomi apho sigcwele khona kwaye sisoyika ngakumbi ukusilela. Ingxaki ayikhathazeki, ingxaki kuxa ukukhathazeka kakhulu kunye nokuzimisela ekusebenzeni kunye nobudlelwane busithintela kwimpilo elungileyo, ukulala kamnandi ubusuku kunye nokutya ngokufanelekileyo. Ngoku ukuba uyayiqonda ngakumbi ingxaki yakho nendlela obuchaphazela ngayo ubomi bakho, lixesha lokufumana indlela yokulawula lonke olu xinzelelo ngaphakathi kuwe! Uninzi lufuna unyango, oochwephesha bengqondo, kodwa kukwakhona nendlela efanelekileyo yokholo. Unokufuna noncedo lwezonyango, kodwa ukuba uphuma ebhedini yonke imihla xa uthandaza umthandazo ukuze uphilise uxinzelelo, ngokuqinisekileyo usuku lwakho luza kuba lukhanya, lube noxolo lwangaphakathi kunye nolungelelwano ngakumbi ngokweemvakalelo.
Umthandazo wokuphilisa ixhala
“Ndiyakholelwa, Nkosi, ukuba unguThixo uBawo uSomandla, umdali wezulu nomhlaba. Ndiyakholelwa kuYesu Krestu, uMsindisi wabo bonke abantu. Ndiyakholelwa kuMoya oyiNgcwele oyingcwalisayo. Nkosi, namhlanje sicela ubabalo lwenkululeko kuxinzelelo kuthi. Ngegama likaYesu, ndihlangule kule nkxwaleko, ndihlangule kulo xhala. Nkosi, ngamana amandla akho akhululayo angakhulula nawuphina umoya woxinzelelo, ususe onke amaqhina nazo zonke iindlela zokubonisa ixhala. Philisa, Nkosi, apho obu bubi buhleli khona, neengcambu zakho kule ngxaki, philisa iinkumbulo, amanqaku amabi. Nkosi Thixo, kwanga uvuyo lungaphuphuma ngokunzulu ebomini bam. Ngamandla akho kunye negama likaYesu, yenza imbali yam, eyadlulayo neyam ngoku. Ndikhulule, Nkosi, kubo bonke ububi, kwaye ngamana ndingaphiliswa ndize ndikhululwe ndikhona phambi kwakho ngamaxesha wesizungu, ukushiywa nokwaliwa. Ndilahla amandla akhululayo eNkosi yethu uYesu Krestu, ixhala, ukungaqiniseki, ukungabi nathemba, kwaye ndibambelele emandleni akhe, Nkosi, ngobabalo lwakhe. Ndinike, Nkosi, ubabalo lokuba ndikukhulule kuxinzelelo, uxinzelelo kunye noxinzelelo. Amen. Kukho nenye umthandazo wokunyanga uxinzelelo mfutshane. Ungayibhala ephepheni kwaye uyenze nangaliphi na ixesha uziva unexhala:
Umthandazo wokuphilisa ukholo nangaliphi na ixesha
«Nkosi Somandla, isicelo esithobekileyo kwaye ngaphandle kokholo olubi. Ndicela uxolo oluncinci, intsikelelo yakho kunye nokukhathazeka kwakho. Enkosi, ndiya kuhlala ndinombulelo kude kube sekupheleni. Amen.
Umthandazo wokunyanga uxinzelelo olungxamisekileyo
“Nkosi, nguwe wedwa ozaziyo iintliziyo zam, ke ngokokholo nokuthobeka, ndiyakucela ubabalo lokufunda ukubeka uxinzelelo lwam kunye nexhala lam kuwe. Ndifuna ukuziyeka ezingalweni zakho, ndithembe kwaye ulinde ngokuzolileyo isenzo sakho ebomini bam! Gcina iingcinga zam, iimvakalelo kunye neemvakalelo ukuze ndingakhathazeki kakhulu. Ndincede ukugcina iingqondo zam zigxile koku kulungileyo kum nakuBukumkani bakho. Ndingcwalise, ukuze ndibengumntu ozaliswe nguMoya oyiNgcwele, ukhanya ngokuthula, uzolile noxolo! Ndiphe amandla ukuze ndizigcine iimvakalelo kunye neengcinga zam zizinzile ngokuthembela kuThixo. Mhlekazi, enkosi kuba ndiyazi ukuba undikhathalele. Ndiza kuzama ukulandela onke amanqanaba ondibonisa ayimfuneko ukuze isicwangciso sakho sizaliseke ebomini bam. Ndiyathemba wena nelizwi lakho. Ndikunika onke amaxhala am kunye neenkxalabo zakho. Ndiphilise kulo lonke ixhala! Ndiyathemba kwaye ndiyathemba kuwe. Amen.